Unokunceda njani Uzivocavoca Kwichibi lamanzi afudumeleyo ngokuchasene neFibromyalgia
20 / 09 / 2018 /0 Amazwana/i Intlungu engapheliyo/av ubuhlungu
I-Fibromyalgia sisifo esingapheliyo esenza ukuba kube nzima ukuzilolonga. Ngaba uyazi ukuba uninzi lwabantu abane-fibromyalgia luneziphumo ezilungileyo ekusebenziseni iphuli yamanzi ashushu? Izizathu zoku zininzi- kwaye siza kuya kwiinkcukacha ezithe kratya kweli nqaku.
Iintlungu ezinzulu kunye eziqatha kwiimisipha kunye nokudibana zihlala ziyinxalenye yobomi bemihla ngemihla kwabo bane-fibromyalgia. Kungenxa yoko le nto sigxile ekuphuhliseni amanyathelo kunye neendlela zonyango ezinokuthi zibe negalelo ekukhululekeni kwentlungu. Zive ukhululekile ukuba ugqabaze ukuba unegalelo elifanelekileyo.
Njengoko sele kukhankanyiwe, eli liqela lesigulana elinentlungu engapheliyo kubomi bemihla ngemihla- kwaye bafuna uncedo. Silwela eli qela labantu- kunye nabo banezinye izifo ezinganyangekiyo ukuba babe nethuba lonyango kunye novavanyo. Njengathi kwiphepha lethu le-FB og ijelo lethu le-YouTube kwimidiya yoluntu ukuba usijoyine kumlo wokuphucula ubomi bemihla ngemihla kumawakawaka abantu.
Kule nqaku, sijonga ukuzivocavoca echibini lamanzi ashushu njenge-painkiller yendalo ye-fibromyalgia- kwaye kutheni ineziphumo ezilungileyo kwabo baneengxaki zentlungu engapheliyo kunye ne-rheumatism. Ezantsi kwenqaku unokufunda kwakhona izimvo zabanye abafundi, kunye nokubukela ividiyo kunye nemithambo ehlengahlengiswa kunye ne-fibromyalgia.
Ukuzivocavoca kwidama lamanzi ashushu anezibonelelo ezininzi zezempilo - kubandakanya ezi zisibhozo:
1. Uqeqesho olwenziwe ngokwezifiso kwindawo enobumnene
Amanzi anefuthe eliphakamisayo-elenza ukuba umthambo wenze umthambo kunye nezinto ezinje ngokulula ukuzenza, ngaphandle kokubeka uxinzelelo kwimisipha kunye namalungu. Xa siziqeqesha kwichibi lamanzi ashushu, sinciphisa amathuba okonzakala kunye "neempazamo" ezinokubakho kwiindlela zemveli zoqeqesho.
Uqeqesho lokuqubha lamanzi ashushu, njengeyoga kunye neepilates, kukuzilolonga ngokuthambileyo, okulungele ngokukodwa abo banokwahluka okomeleleyo kwe-fibromyalgia kunye ne-rheumatism ethambileyo. Yindawo entle yokwakha umthamo wezihlunu ukuze ukwazi ukumelana ngakumbi nangakumbi njengoko usomelela.
Funda: -Abaphandi banokufumanisa unobangela wenkungu yefibro!
2. Amanzi ashushu anyusa ukuhamba kwegazi
Amalungu, imithambo-luvo kunye nezihlunu zifuna ukondliwa- kwaye oku kukufumana ngokuhamba kwegazi. Ukuzivocavoca kunye nokuzivocavoca kunokwazi ngokubanzi ukwandisa ukuhamba kwegazi kuwo wonke umzimba wethu. Ngokuzilolonga echibini lamanzi ashushu, abantu abaninzi abane-rheumatism kunye ne-fibromyalgia baxela ukuba le miphumo iyaphuculwa kwaye banamava okuba ukujikeleza kwegazi kuya kufikelela nzulu kubuthathaka bemisipha yokuqaqanjelwa, imisipha kunye namalungu aqinile.
Ubushushu emanzini banegalelo kwimithambo yegazi evulekileyo kunye nokuhamba okuhamba ngokukhululekileyo kunaleyo ikhankanyiweyo kule minyaka ikhankanyiweyo. Kwiintlungu ezingapheliyo, umntu uhlala ediniwe "ukuqinisa" - naxa kungekho sidingo sale nto, kwaye kungokunyibilika kula maqhina enzonzobila apho uqeqesho lwamanzi ashushu echibini eza ngokwawo.
Funda: -Abaphandi bakholelwa ukuba ezi proteni zimbini zinokuchonga iFibromyalgia
3. Unciphise uxinzelelo kunye noxinzelelo
Kubhalwe ngophando ukuba abo bane-fibromyalgia banayo izehlo eziphezulu «zengxolo yengqondo». Oku kuthetha ukuba izihlunu, i-tendon, izicubu ezihambelana nazo, i-nerve kunye nengqondo zixinene kubuninzi bosuku. Ukufumana ukuzola kunye nokufunda ngeendlela zokunciphisa ingxolo ye-nerve, uxinzelelo kunye noxinzelelo ke ngoko kubaluleke ngakumbi kumntu onesifo esinganyangekiyo seentlungu.
Amanzi afudumeleyo ahlala esebenza ethomalalisa ingqondo xa kukho imisinga efudumeleyo echibini. Uxinzelelo kunye nokuxinana kwakhona kulula ukukubeka ecaleni xa ukwinto yakho elungileyo-oko kukuthi echibini lamanzi ashushu.
Amanye amanyathelo anokunceda ukunciphisa uxinzelelo kubomi bemihla ngemihla kunye negalelo kumandla anyukayo kukutya okwenziwe ngokwezifiso okunesiseko samandla sempilo, isibonelelo se-Q10, ukucamngca, kunye nonyango lomzimba lwamalungu kunye nezihlunu. Oku kubonise ukuba xa bebonke (okanye bebodwa) banokuba negalelo ekwandiseni amandla kubomi bemihla ngemihla. Mhlawumbi unokunikezela imizuzu eli-15 yokucamngca emva kokuphela kosuku lomsebenzi, umzekelo?
4. Ukuphucula umgangatho wokulala
Ngaba uchaphazelekile ziingxaki zokulala? Emva koko awuwedwa. Ixhaphake kakhulu into yokuba abo baneentlungu ezingapheliyo babe nobunzima ekufumaneni ubuthongo, kwaye bahlala bavuka bephinda ebusuku ngenxa yeentlungu.
Ukuzivocavoca kwidama lamanzi ashushu kunokukhokelela ekuphuculeni umgangatho wokulala kunye nokulala ngokulula. Ukuziphatha kwamanzi ashushu afundiswayo kubandakanya izinto ezininzi, kodwa eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba kunciphisa uxinzelelo lomsipha, ingxolo yengqondo kwingqondo kwaye ke kunciphise umsebenzi wombane ogqithisileyo emzimbeni walabo bane-fibromyalgia.
Kukho amayeza okuthomalalisa iintlungu kwaye alale, kodwa ngelishwa uninzi lwazo lunoluhlu olude lweziphumo ebezingalindelekanga. Ke ngoko, kubalulekile ukuba ulunge ekusebenziseni unyango lwakho ngohlobo lokuhamba ehlathini, uqeqesho lwamanzi ashushu echibini, kunye nokusetyenziswa kwonyango lwenqaku lokuqaqamba kwezihlunu ezibuhlungu kunye nokudada.
Funda: Imilinganiselo yokuzikhusela ngokuchasene neFibromyalgia Mist
5. Umthwalo ophantsi kumajoyina abuhlungu
Abantu abaninzi abane-fibromyalgia bafumanisa ukuba ukuzivocavoca okuphezulu (njengokubaleka kwiindawo eziqinileyo) kunokubangela ukuba imeko ibe mbi kakhulu kwi-fibromyalgia. Kwi-fibromyalgia, iimpendulo ezinjalo ziba namandla ngakumbi kunabanye abaninzi ngenxa yokugqithisa amandla amajoni omzimba kunye nenkqubo ye-autonomic nervous system.
Uqeqesho lwamanzi ashushu echibini lwenziwa emanzini- oko kuthetha ukuba uqeqesho lungumthwalo ophantsi kwimisipha nakumalungu akho. Uxinzelelo oluphezulu kumalungu, kwiimeko ezininzi, lunokukhokelela ekuphenduleni kokudumba kwabo bane-fibromyalgia kunye ne-hypersensitivity - ethi yona ikhokelele kwintlungu edibeneyo kunye nezifo zemisipha ezinxulumene nayo.
Ke ngoko, ukuzivocavoca emanzini ashushu kufanelekile kwi-rheumatics kunye nakwabo baneentlungu ezingapheliyo.
6. Ukonyusa umsipha kunye nokudibeneyo
Imisipha emqolo nasemva kwentamo? Ukuzivocavoca kwichibi lamanzi ashushu yeyona ndlela ilungileyo yokwandisa ukushukumiseka komgogodla nentamo, kunye negalelo lokuhamba okukhulu kwimicu yemisipha.
Ngamanzi afudumeleyo kunye nokuzivocavoca okuthambileyo okusebenzayo ngakumbi xa kuziwa ekufakweni kwento ephuculweyo yokuhamba kwentamo nasemva. Yiyo le nto kutheni le ndlela yokuzilolonga ilungele ukukhululeka kweempawu kunye nokuphuculwa komsebenzi.
Ukuba unemibuzo malunga neendlela zonyango kunye novavanyo lwe-fibromyalgia, sicebisa ukuba ujoyine umbutho wakho we-rheumatism, ujoyine iqela lenkxaso kwi-intanethi (sicebisa iqela le-facebook «I-Rheumatism kunye nePain engapheliyo-eNorway: Iindaba, ubunye kunye noPhando«) Kwaye uvule nabo bakungqongileyo ngamanye amaxesha ukuba ube nobunzima kwaye oku kunokuhamba ngaphezulu kobuntu bakho okwethutyana.
7. Ukwenza igalelo kwimpilo yentliziyo engcono
Xa uhlala unentlungu ebuhlungu, kunokuba nzima ukufumana umsebenzi owoneleyo- kwaye oku kunokuba nefuthe elibi kwintliziyo yakho. Kwichibi lamanzi ashushu unokusebenza kakhulu kwaye uphakame izinga lokubetha kwentliziyo yakho ngaphandle kokungakhuseleki.
Ukuzivocavoca echibini lamanzi ashushu yindlela ethambileyo yokuzivocavoca umzimba enegalelo ekuphuculeni impilo yentliziyo. Oku kunceda ukunciphisa ithuba lesifo sentliziyo- njengokuhlaselwa kwentliziyo kunye namahlwili egazi.
8. Udibana nabahlobo abakuqondayo kunye nokubandezeleka kwakho
Uqeqesho lwamanzi ashushu echibini luhlala lusenzeka ngokwamaqela - rhoqo kumaqhekeza angama-20 okanye angama-30 Abantu abaninzi abanengxaki efanayo, udibana nokuqonda okuhle ukuba kunjani ukuba kwimeko ekwimeko ebuhlungu njengaleyo ukuyo. Mhlawumbi ungadibana nomhlobo olungileyo wexesha elizayo kuqeqesho?
Funda: Iingcebiso ezi-7 zokunyamezela ngeFibromyalgia
Sikwabulela kakhulu ukuba uyafuna Rhuma simahla kwisiteshi sethu se-YouTube (cofa apha). Apho uya kufumana inani leenkqubo ezilungileyo zokuzilolonga ezilungelelaniswe noxinzelelo, kunye nevidiyo yesayensi yezempilo.
Siyathemba ukuba eli nqaku linokukunceda ekulweni i-fibromyalgia kunye neentlungu ezingapheliyo.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/slik-hjelper-trening-i-varmtvannsbasseng-mot-fibromyalgi-2.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2018-09-20 20:01:152020-05-03 13:37:14Unokunceda njani Uzivocavoca Kwichibi lamanzi afudumeleyo ngokuchasene neFibromyalgia
Amanyathelo okuNceda iNhlungu ngeNdalo kwiFibromyalgia La manqaku ali-18 eMisipha ombi anokuXela ukuba uneFibromyalgia